Tag: geographic search | Martech Zone
Kpido: nchọpụta ala
Friday, May 11, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Ihe edere na nso nso a anyị mere na 6 Isi okwu na-ezighi ezi kwuru banyere echiche na-ezighị ezi na azụmahịa mba ma ọ bụ mba ụwa kwesịrị izere ọchụchọ mpaghara. Ọ bụghị naanị na nghọtahie, ọ bụ nnukwu ndudue. Mepụta usoro SEO nke na-eme ka ị nwee mpaghara nwere ike ịbụ obere asọmpi, chọọ obere akụrụngwa, ma bulie nloghachi gị niile. Na ọ dịghị ego gị ogo na-abụghị ala Keywords ma ọ bụ nkebi ahịrịokwu. Dị nnọọ iche, ogo ọma na mpaghara gị nwere ike ịme ka ọkwa gị na mba na mba ụwa.